Maxaa ka soo baxay kulankii Farmaajo iyo Rooble? | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo bishii la soo dhaafay qaaday tallaabo kasta oo sharciga baal-marsan, ayaa 16 September sheegay inuu dhimay awoodda Ra’iisul Wasaaraha, taas oo ahayd sharci ku tumasho aan dhaqan gal noqon karin.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xalay yeeshay kulankoodii ugu horreeyay tan iyo bishii hore, markaas oo fashil ay ku soo dhamaadeen dadaallo la doonayay in lagu soo af-jaro xasaraha siyaasadeed ee ka aloosan Madaxtooyada.
Sida ay sheegayaan ilo xog-aal ah, kulankaan waxaa soo qaban qaabiyay Madaxweynaha dowlad goboleedka Koofur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen), kaas oo mar labaad isku howlay dhexdhexaadinta labada dhinac.
Ilo ku dhow dhow Madaxtooyada Villa Somalia ayaa KON u xaqiijiyay, in kulanka xalay uu ahaa mid hordhac ah, isla-markaana lagu ballamay in dib la isku soo laabto caawa, si loo soo afjarayo khilaafka galaaftay shaqadii iyo sumcaddii uu bulshada ku dhex lahaa eedeysane, Fahad Yaasiin.
Sidoo kale, wararku waxa ay tibaaxayaan, in labada daraf muujiyeen isku soo dhawaansho iyo biseyl ku aaddan in xalliyo tabashooyinka ay dhinacyadu kala tirsanayaan, sida; arrinka NISA, Wasiirka Amniga iyo kiiska Ikraan Tahliil.
Madaxweynaha KG, Cabdicasiis Laftagareen, MW Galmudug, Axmed Qoorqoor iyo Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, ayaa bishii hore ku guuldarreystay dadaallo ay xal ugu raadinayeen khilaafka.
September-tii na-weydaaratay, Farmaajo wuxuu ku dul-hagootay Fahad Yaasiin oo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ka raacdeeyay shaqadii hoggaanka NISA, kadib markii lagu eedeeyay khaarijinta Ikraan Tahliil.
Farmajo, wuxuu si buuxda uga horyimid magacaabidii RW-ha ee Agaasimaha Nabad-sugidda, Bashiir Goobe, shaqa ka raacdeyntii Wasiirkii hore ee Amniga, Xundubey iyo magacaabidda wasiirka cusub Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Sidoo kale, wuxuu is hor istaag ku sameeyay baaritaanka hay’adaha garsoorka ee cadaaladda loogu raadinayo sakaalad Ikraan oo ku magan gacanta Kooxdiisa, wuxuuna xillal u magacaabay eedeysaneyaal dacwad ciidan ku furan tahay.
Tan iyo markii uu RW Rooble, tagay dalka Qatar, waxaa hoos u dhacay dadaalladii uu hormuudka u ahaa xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha ee cadaaladda loogu baadi-goobayay Ikraan Tahliil, oo 26-kii Juun ay af-duubteen Kooxda Farmaajo.